မြင့်မြင့်ဝင်း (ဝိပဿနာ ယောဂီ) - ဝီကီပီးဒီးယား
(၁၉၃၁-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၁"။-၂၈)နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၁၉၃၁
စက်တင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂(၂၀၁၂-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၉"။-၂၂) (အသက် ၈၀)
ဒေါ်ခင်မာကြွယ် ၊ ဦးဌေးကြွယ် ၊ ဒေါ်မြမြသန်း၊ ဦးမြင့်ကြွယ်
ဟင်္သာတမြို့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်အဖ ဦးဘဦး+ပေါင်းတည်မြို့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်အမိ ဒေါ်တင်လှ
ဝိပဿနာ ယောဂီ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း သည် ဗမာလူမျိုး ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ကရိလမ်း(ယခု ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း) (ယခု အ.ထ.က(၃)ဗိုလ်တထောင်) တိုက်ကျောင်းနှင့် ကပ်လျက်နေအိမ်တွင် ဟင်္သာတမြို့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဥက္ကလာဦးစေတီဘုရားတကာ အဖ ဦးဘဦး၊ ပေါင်းတည်မြို့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်အမိ ဒေါ်တင်လှ (ဂျီစီဘီအေ လူကြီး ဝိုင်အမ်ဘီအေလူကြီး၊ သမာဓိ မြို့ဝန်ပန်းကန်စက်ဦးသော် ၏ညီမအရင်း) တို့မှ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း (ခေါ်) ဒေါ်အမာ ကို နိုဝင်ဘာ၊ ၂၈၊ ၁၉၃၁ ခုနှစ် တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ အဖ ဟင်္သာတ-ဦးဘဦးမှာ မြန်မာပြည်၏ ပထမဆုံး ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ်တွင် ငွေအားလူအားဖြင့် ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဟင်္သာတမြို့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်၊ မြေပိုင်ရှင် ဦးဘိုးငြိမ်း+ဒေါ်ရွှေမြတို့၏တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်သည်။ ဦးဘဦး+ဒေါ်တင်လှမိသားစုသည် ပေါင်းတည်မြို့၊ နတ္တလင်းမြို့၊ ဇီးကုန်းမြို့တို့တွင် တန်(၁၀၀)ကျ ဆန်စက် ၁၃ လုံး ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဦးဘိုးဆင့်+ဒေါ်သက်တို့၏သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်တင်လှသည် မြန်မာ့သမိုင်းတွင်ထင်ရှားသော ဆင်ဖြူရှင်မင်းနှင့် မြန်မာစစ်သူကြီး မင်းကြီးမဟာသီဟသူရတို့၏ (၂) ဆက်မြောက် မြေးတော် ဖြစ်သည်။ ဦးဘိုးဆင့်၏ဖခင်မှာ ဘိုးရွှေကွန်ဖြစ်ပြီး ဘိုးရွှေကွန်၏ဖခင်မှာ ဘိုးသစ္စာ၊ ဘိုးသစ္စာ၏ဖခင်မှာ စဉ့်ကူးမင်း၊ စဉ့်ကူးမင်း၏ဖခင်မှာ ဆင်ဖြူရှင်မင်းဖြစ်၍ ဆင်ဖြူရှင်မင်း၏ဖခင်မှာ အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျဖြစ်သည်။
မောင်နှမ ၉ ယောက် (ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဦး၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆွေ၊ ဦးမောင်မောင်သန်း (စာရေးဆရာ မိုးနတ်သျှင်)၊ ဦးမောင်မောင်ညွန့်၊ ဦးခင်မောင်သွင်၊ ဦးနေဝင်း၊ ဒေါ်တင်တင်ဦး (စာရေးဆရာမ တင်တင်ဦး(ပေါင်းတည်))၊ ဦးကျော်အေး) တွင် ဒုတိယမြောက်သမီးကြီး ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်း ကရိလမ်း(ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း) ကရိမက်သဒစ် ကျောင်း (Creek Methodist School) တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့မ အထက်တန်းကျောင်း မှ ၁၀ တန်း စာမေးပွဲ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ Matriculation Class အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က မြို့မ အထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးမှာ မြို့မ ဦးဘလွင် ဖြစ်သည်။ မြို့မကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားစဉ် ကလေးဘဝ ကတည်းကပင် မိဘ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများတို့၏ ကျေးဇူးကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ စာပေများနှင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို အခြေခံကျကျ နားလည်ခဲ့သည်။
၄ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း (ခေါ်) ဒေါ်အမာ၏ လူငယ်များအတွက် ဆုံးမကဗျာ
မြေပိုင်ရှင်သူဌေး﻿ ဦးစိန်၊ ဒေါ်စိန်﻿ကျော့တို့၏ သားဖြစ်သူ ရန်ကုန်မြို့၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် လမ်း ၅၀ နေ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် နှင့် ရန်ကုန်မြို့ ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ တွင် ထိမ်းမြှားလက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ ခင်ပွန်း မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်သည် ၁၉၄၆ခုနှစ် မှ ၁၉၄၈ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလတွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ရန်ကုန်ခရိုင် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် မြို့မကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ဗိုလ်သန်းကြွယ်၊ သခင်သန်းကြွယ်၊ မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် (ပင်လုံစာချုပ်) အမည် ဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည့် အပြင် ၁၉၄၇ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သမိုင်းဝင် ပင်လုံညီလာခံ သို့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် အတူ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပင်လုံစာချုပ် အောင်မြင်စွာ ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးအတွက် ထူးခြားစွာဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
၁၉၄၈ ခုနစ်မှ ၁၉၆၂ ခုနစ်ထိ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ ဖဆပလ အစိုးရခေတ် ပြည်ထောင်စုနေ့၊ လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ အမျိုးသားနေ့ နှင့် အာဇာနည်နေ့များတွင်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အမျိုးသမီးရေးရာ လုပ်ရှားမှုများတွင်လည်းကောင်း ဒေါ်မြရီ (ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု၏ ဇနီး)၊ ဒေါ်နုနုဆွေ (ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဗဆွေ၏ ဇနီး)၊ ဒေါ်နွယ်နွယ်ရီ (ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဦးကျော်ငြိမ်း၏ ဇနီး) စသည်တို့နှင့် အတူ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သမာအာဇီဝဖြင့် မိသားစု ကြိုးစားရှာဖွေထားခဲ့သော ပစ္စည်းများ၊ အဆောက်အအုံများကို အစိုးရက ပြည်သူပိုင်သိမ်းခဲ့စဉ် လွန်စွာ စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရသော်လည်း တရားနှင့် ဖြေဆည်နိုင်ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး အနေဖြင့် လောကဓံတရားကို အပြုံးမပျက် ရင်ဆိုင်ဖြေဆည်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် မတရားပြည်သူပိုင်သိမ်းပိုက်ခဲ့သော အစိုးရ အပါအဝင် မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းကိုမျှ အာဃာတ မထားခဲ့ချေ။ မေတ္တာဖြင့်သာ ခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို အထူးကိုင်းရှိုင်း သော အမျိုးသမီးကောင်း ယောဂီတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး ဆွေကြီးမျိုးကြီးဖြစ်သော်လည်း မင်္ဂလာတရား တော်နှင့်အညီ မည်သူ့ကိုမျှ မောက်ကြွားဝင့်ဝါခြင်း၊ မာန်မာနထားခြင်းမရှိဘဲ၊ ခြိုးခြံစွာကျင့်သုံးနေထိုင်၍ လှူသင့်လှူထိုက် ပေးသင့်ပေးထိုက်သူအား ရက်ရောစွာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းတတ်သည်။ လူကြီး-လူငယ်မရွေး၊ ဆင်းရဲ-ချမ်းသာမရွေး၊ လူမျိုး-ဘာသာမရွေး လူအားလုံးကို မေတ္တာစိတ်ဖြင့် လှိုက်လှဲပျူငှာစွာ ဆက်ဆံပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ ၏ အဆုံးအမ တရားတော်တို့ကို ပုံပြင်ဇာတ်တော်၊ နိပါတ်တော်ဝတ္တုများဖြင့် သားသမီးများကိုသာမက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၊ လူငယ်များအား မကြာခဏ ရှင်းလင်းပြောပြလေ့ရှိသည်။ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားကို ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ခန့်မှ နှစ်ပေါင်း( ၃၀) ကျော် ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်ကပင် ပန်းနာရင်ကြပ်ဝေဒနာကြောင့် အမြဲလိုလို ကုတင်ပေါ်တွင် မအိပ်နိုင်ပဲ စားပွဲခုံပေါ် မေးတင်ပြီး ထိုင်လျက်သာ အိပ်စက်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် နေ့စဉ် အာနာပါန ဝိပဿနာ တရားရှုမှတ်ခြင်းကြောင့် ပန်းနာရင်ကြပ်ဝေဒနာ ရောဂါ ပျောက်ကင်းခဲ့ပြီး အသက် ၈၁ အရွယ်ထိ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။
ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း (ခေါ်) ဒေါ်အမာ၏ လူငယ်များအတွက် ဆုံးမကဗျာ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဒါန၊ သီလ၊ ခန္တိစ
မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ
သိပါ၊ ကျင့်ပါ၊ ဝိပဿနာ
တို့များ ဘဝ၊ တစ်သက်တာ။
ဘာသာရေးသာမက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ များ၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် မြင့်မားရေးဆိုင်ရာများ၊ လူမှုရေးဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ဝတ္တရားများ၊ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ သည်းခံခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျင့်သီလဆိုင်ရာများကိုကဗျာဖြင့်လည်း သွန်သင်ဆုံးမလေ့ရှိသည်။
ယောဂီ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း (ခေါ်) ဒေါ်အမာ သည် အသက် ၈၁ နှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၂ ရက်၊ စနေနေ့ ည ၉ နာရီ ၂ဝ မိနစ် တွင် ရန်ကုန်မြို့ ၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကျန်ရစ်သူ သားသမီး ၄ ဦး မှာ ဒေါ် ခင်မာကြွယ်၊ ဦးဌေးကြွယ်၊ ဒေါ်မြမြသန်း၊ စာရေးဆရာ-မြန်မာ့သမိုင်းပညာရှင် ဦးမြင့်ကြွယ် (မြို့မ-မြင့်ကြွယ်) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ခင်ပွန်း မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ် နှင့် ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း(ခေါ်) ဒေါ်အမာတို့၏ ကွယ်လွန်ခဲ့သော ရက်၊ လ တို့သည် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အတူတူ ဖြစ်နေသည်။
ခင်ပွန်း မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်နှင့် ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း (ခေါ်) ဒေါ်အမာ ၏ ဓာတ်ပုံ
ယောဂီ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း (ခေါ်) ဒေါ်အမာ နှင့် မြေးနှစ်ဦး တို့နှင့်အတူ ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံ
↑ မြို့မ-မြင့်ကြွယ် (၁၂-၂-၂၀၂၀). "သမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်နှင့် မြို့မ-ဦးသန်းကြွယ်". မြန်မာတိုင်းမ် MYANMAR TIMES DAILY အတွဲ (၄).
↑ (2000) History of Burma (in en). NewDelhi: Asian Educational Services, 257. ISBN 9788120613652။
↑ ပန်းကန်စက်ဦးသော် (၁၄.၁၀.၁၉၇၄). မြန်မာနိုင်ငံ ကြွေပန်းကန်အစ ဦးသော် က (၅၈၃/၇၄), ၁၂၄-ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့: နယူးစာပုံနှိပ်တိုက်။
↑ မြို့မ-မြင့်ကြွယ် (၁၉၈၁). ကျွန်တော်သိသောဖိုးဖိုးသော်. ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်း။
၁၉၉၅ ခုနစ် မြို့မကျောင်းစိန်ရတုအထိမ်းအမှတ်၊ မြို့မဟောင်းများ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း အကျဉ်းစာအုပ်
စဉ့်ကူးမင်း နှင့် ပထမ မြောက်နန်းမိဖုရားကြီး သီရိမဟာမင်္ဂလာဒေဝီ Sri Maha Mangala Devi တို့၏ မြေးတော် ဘိုးရွှေကွန် ၏ သားတော် ဦးဘိုးဆင့်(ပန်းကန်စက်ဦးသော် ၏ဖခင်) ရေးသားခဲ့သည့်ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ ဘဝဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်း၊
ဦးဘိုးဆင့် ၏မြေးအရင်း၊ ဒေါ်တင်လှ ၏သား စာပြုအရာရှိ ဦးနေဝင်း B.A (History) ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ရေးသားပြုစုခဲ့သည့် Family pedigree chart (Genealogy research paper) မှတ်တမ်း မှတ်စုများ
ကနောင်မင်းသားကြီး၏ မြစ်တော်၊ နဂါးဗိုလ် ထိပ်တင်ဒွေး၏သမီးတော် (အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီးနှင့် ရှေ့နေချုပ် ဦးသာထွန်း၏ဇနီး ဒေါ်ထိပ်တင်ညွန့်) ၏ ၁၉၉၅ ခုနစ် မြို့မကျောင်းစိန်ရတုအထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင်ကိုယ်တွေ့ပြောပြချက်၊
မြို့မ-မြင့်ကြွယ်၏ "ကျွန်တော့်ကျေးဇူးရှင် မိခင်ကြီးနှင့် ကျန်းမာရေးအကျိုးပြု လက်တွေ့ ဝိပဿနာ" ဆောင်းပါး
၂၀၀၅ ခုနစ် မြို့မ-မြင့်ကြွယ် ရေးသားသော မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အထူးမှတ်သားဖွယ်နှင့် လူငယ်ရေးရာ မှတ်စုများ စာအုပ်
တောင်ကြီးကောလိပ် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးစန်း(မြို့မကျောင်းသားဟောင်း)၏ ကိုယ်တွေ့ပြောပြချက်
မိသားစု နှင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်း ချက်
စက်တင်ဘာ ၂၇ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြင့်မြင့်ဝင်း_(ဝိပဿနာ_ယောဂီ)&oldid=503423" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၄:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။